Ka faa'idaysiga wakhtiga( Q 6AAD E Guusha)
Monday April 15, 2019 - 11:16:46 in Articles by Hadhwanaag News
Salaam kal iyo lab kaso Go"day ka dib waxaan hambalyo u diraya shacabwaynaha fara badan e ku xidhan barnamijkan taxanaha guusha
Salaam kal iyo lab kaso Go"day ka dib waxaan hambalyo u diraya shacabwaynaha fara badan e ku xidhan barnamijkan taxanaha guusha e isla markaa igu so celiyey jawaab fiican o wax ku oo ah iguna dheri galiyey ina aan barnamijka joojin isla markana aan si wado inta ka dib hambalyadaas manta waxaynu lafa guraynaa faa”idada u wakhtigu leyahay sida fiican e aynu uga faa”idasanayno insha allah.
Wakhti (Ingiriisi: Time; carabi: زمن) wakhtigu waa adiga – (qofka) ama noloshaada waxaan kale o odhan karnaa waa cabirka iyo xisaabinta mudada u dhaxeysa laba goor oo kala duwan midaasi oo ka soo bilaabanta wax la soo dhaafay, imika (hada), iyo goor soo socota oon weli la gaadhin. Sidoo kale wakhtigu waa tirinta isbedelka saacada, habeenka iyo maalinta; maalmaha todobaadka, billaha, sanadka, qarniga iyo wixii ka badan intaas. Wakhtigu wuxuu wax badan ahaa qodob ka mid ah diimaha, sayniska, taariikhda iyo filoosafi taasi oo si kala duwan loogu xusay dhamaantood. In kastoo qodobka ah "wakhti" uu ku fadhiyo micno aad u weyn oo saameyn ku leh qodobo badan oo kala duwan, waxaa wakhtiga inta ugu badan loo isticmaalaa qiyaasta, la socoshada iyo xisaabinta in mudo ah oo noqon karta wax la soo dhaafay, mid hada la joogo ama mid soo socda. Waxaa wakhtigu leeyahay halbeegyo lagu xisaabiyo oo lagula socdo, kuwaasi oo loo isticmalo siyaabo kala duwan. Halbeegyada wakhtiga lagu cabiro waxaa ka mid ah saacada (Ilbiriqsi, Daqiiqad), maalinta iyo habeenka, Todobaadka, bisha, sanadka, qarniga iyo wixii la halmaala ee intaas ka badan.
Hadaba waxa jira wakhtigu in u yahay il-bidhiqsi il-bidhiqsi lagu daray taas oo sidan u dhagan hoose: Qeeybo badan ayaa loo kala saaraa wakhtiga taas oo ku xidhan hadba meesha la joogo.dunida aynu ku nool nahay waxaa la isku raacay qeeybahan hoos ku qoran:
ü Ilbiriqsi oo ah midka ugu yar.
ü Daqiiqad oo u dhiganta lixdan (60) ilbiriqsi,
ü Saacad waxay la mid tahay lixdan (60) daqiiqad,
ü 24 saac oo ah habeen iyo maalin.
ü Todobaad sidoo kale loo yaqaan Usbuuc waa todoba maalin.
ü Bil waa sodon (30) maalmood.
ü Sanad oo ah. Sanad waa 365.4 maalmood.
ü Qarni waa boqol (100) sanno oo wakhtiga dunidan aan ku nool nahay ah.
Hadaba walalayaal maadama o aan isla garanay wakhtigu waxa u yahay iyo sida u qabsamo bal hadaba side uga faa”idaysan karnaa shakhsi ahaan iyo shacab ahaanba ila soco xaga hoose:
oCibaado joogta ah o an kala Go” lahayn.
oIn aad wax baratid
oIn aad wax qabsatid
oIn aad dadka kale wax u qabato
oIn aad xataa wakhtiga aad firaaqada tahay aad wax qabsato.
oIsbadal ku same noloshaada o wakhtiga aad haysatid horumari.
o Barashada xirfado cusub.
o Xiriiri ehelkaaga.
oIyo waxyaabo fara badan o kale o aynaan so koobi karayn.
Umada somaliyed waxaan kula talinayaa in ay wakhtigoda ka faa”idaystaan isla markaana ay lumin nus il-bidhiqsi gaar ahaan dhalinyarada o wakhtigooda dayaca wakhtiyadaan danbe sababto ah maalinka qiyaame wa lays waydinaya hadi aad wakhtigaga si fiican uga faa”idaystay waad guulaysan oo jano ayaad galin hadii aad khasaraysid waad guuldaraysan ilaahay o ku naxaristo mooye maadama u ilahay yahay danbi dhaafe dadkisa u naxariista.
Ugu danbayn waxaan ku so kobayaa hadalkan qiimaha leh ay yidhaahden dadki ku dayashada mudnaa e kala ahaa Cumar bini C/casiis wuxuu yidhi : Habeenka iyo maalintu way kaa shaqaysanayaan ee adna ka shaqayso si lamida Ibnul Qayim wuxu yidhi wakhtiga oo ladayacaa way ka xuntahay dhimashada , waayo waqti dayicidu waxay kaa goysaa illaahay iyo maalinta aakhiro , halka ay dhimashadu kaa goyso adduunka iyo ehelkiisa.
Engineer Developer Researcher And Leader
( isbaddel ka bilaabmay shakhsi isla markaana u xuub siibtey bulsho dhan si ay u noqdaan Hormuudkii Horumarka Ee dunidan aynu ku noolnahay )
AFRICA NEVER GIVE UP WE NEED GREAT CHANGE ANY KIND OF LIFE